အသိသတိ - မ
မ အက္ခရာစဉ်ထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ မ အက္ခရာခေါင်းစဉ်နဲ့ နာမည်များ
- စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်သိမှတ်တဲ့နေရာမှာ သိမှတ်နိုင်မှုစွမ်းအား အတိုင်းအတာဟာ မိမိခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း၊ စိတ် စေတသိက် အကြောင်းတွေကို မိမိအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ သိနေလဲ? အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
- စိတ်ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေသူတွေနဲ့ အပြစ်တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ထားသူတွေရဲ့ စိတ်အနေအထားဟာ ပုံမှန်အတိုင်း မစဉ်းစားနိုင်သလို တွေးတော ဆင်ခြင်မှုတွေမှာလည်း အားနည်းနေတဲ့ စိတ်အခြေအနေမျိုး။
- လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ လူ့စည်းကမ်းအရ အသိအမှတ်မပြုတဲ့ စိတ်အနေအထား။ ခံစားမှု၊ လိုချင်မှု၊ စွဲလမ်းမှု လွန်ကဲနေတော့ သတိလွတ်ပြီး မူးမူးရူးရူး ပြောဆို ပြုမူ လှုပ်ရှားနေတဲ့ မူးယစ်စိတ်။
- မေ့ကျန်ခြင်းဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ဆုံးရှုံးသလို၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်ကိုပါ ဆုံးရှုံးတတ်လို့ သတိထားသင့်တဲ့စိတ်။
- မေ့တတ်ခြင်းနဲ့ မေ့လျော့ခြင်းဟာ မိမိရဲ့သတိစိတ်ကို အားပျော့စေပါတယ်။
- လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာ မိမိစိတ်ကို တည့်တည့်ထားကြည့်ရင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှ အကြောင်းအရာအားလုံးဟာ မေ့ပစ်ချန် ထားခဲ့ရတဲ့ သဘာဝသဘောတရားအဖြစ် ရောက်ရှိသွားတာကို လက်တွေ့သိနိုင်တယ်။
- ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှတွေကို မမေ့နိုင်ဘဲ သတိရနေခြင်းဟာ မိမိစိတ်ကို ပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ သဘာဝ ဆိုတဲ့သဘောကို နားလည်သဘောပေါက်ရင်တော့ အရာရာဟာ အချိန်ကြာလာရင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားစေတယ်။
- လူက အသက်ရှင်နေပေမယ့် စိတ်ကအလုပ် မလုပ်တော့ဘဲ မေ့မြောစိတ်။
- မေးထူးခေါ်ပြောအဆင့်နဲ့တော့ သိချင်တာမှန်သမျှကို အကုန်အစင် သိဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သိချင်တာကို သိချင်ရင် မေးမြန်း စုံစမ်းမှရမယ်။ မေးခွန်းတွေ ထုတ်နှုတ်ပြီး မေးတတ်မှရမယ်။ မေးမြန်းရှာဖွေလေ့လာတဲ့ အလေ့အကျင့် မရှိတဲ့သူဟာ၊ အသိဉာဏ် ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အားနည်းနေတတ်ပါတယ်။
- ဆန်းသစ်တဲ့ တီထွင်မှုကို မလုပ်တတ်တဲ့သူတွေ၊ စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူတွေ၊ သူများနောက်က အလွယ်လိုက်ပြီး မိမိစိတ်ကို အလုပ်မလုပ်ခိုင်းတဲ့ သူတွေဟာ ရှေ့ကလူတွေလုပ်ခဲ့ပြီးသား လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကိုပဲ အမျိုးမျိုး လှည့်ပတ်သုံးတတ်တဲ့ တစ်ခါလာလည်း မဲပြာပုဆိုးစိတ်။
- လူ့လောကထဲကို လူအဖြစ်နဲ့ ရောက်ရှိလာခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေက ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို မီးခိုးကြွက်လျှောက်၊ မိုးမဆုံး မြေမဆုံး လိုက်ရှာလို့ ရရှိလိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးအဖြေက ခန္ဓာကိုယ် ရရှိခြင်းကြောင့် ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ပြီသာမှတ်! တဲ့။
- မာန်တက် ထောင်လွှား ဘ၀မြင့်တဲ့အုပ်စုဝင် မာနစိတ်အမျိုးအစား။
- မိုက်ကန်းတဲ့စိတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေဟာ မိုက်ကန်းကန်းအလုပ်တွေ၊ မိုက်တိမိုက်ကန်းအလုပ်တွေ၊ မိုက်တွင်းနက်တဲ့အလုပ်တွေ၊ မိုက်မဲတဲ့ အလုပ်တွေ၊ မိုက်ရူးရဲတဲ့အလုပ်တွေ၊ မိုက်ရိုင်းတဲ့အလုပ်တွေ၊ မိုက်လုံးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကို မရှက်မကြောက် ကျူးလွန်ပြီး မိုက်ပြီးရင်း မိုက်နေတဲ့စိတ်။